Ciidamada Puntland iyo Somaliland oo isku-dhac ku dhexmari karo gobolka Sanaag - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada Puntland iyo Somaliland oo isku-dhac ku dhexmari karo gobolka Sanaag
March 21, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Ciyoon oo wefdiga Puntland u tilmaamaya inta ay isku jiraan labada ciidan. [Xishada Sawirka: Puntland TV]
Garoowe-(Puntland Mirror) Asbuucyadii u dambeeyay waxaa sii kordhaysay xiisad colaadeed oo ka jirta gobolka Sanaag oo u dhaxeysa Puntland iyo Somaliland.
Xiisada ayaa soo ifbaxday kadib markii horaantii bishaan ay deegaano gobolkaas kuyaala yimaadeen ciidamo wata gaadiid dagaal oo ka socda maamulka Somaliland.
Dhanka kale, ciidaamo aad u hubeysan oo katirsan dowladda Puntland ayaa gaaray deegaanka Yube ee gobolka Sanaag, iyaga oo saldhigyo ka sameystay duleedka Yube.
Sida ilowareedyo dadka deegaanka ah ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror, labada ciidan ayaa isku jira masaafo aad u gaaban, taasoo keeni karta isku dhac.
Maanta oo Khamiis ah, masuuliyiin katirsan dowladda Puntland oo ay ku jiraan wasiiro, xildhibaano iyo guddoomiyaha gobolka Sanaag ayaa gaaray jiida hore oo ay ku suganyihiin ciidamada Puntland, sida uu baahiyay taleefishinka dowladda Puntland.
Guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Ciyoon oo la hadlay Puntland TV ayaa sheegay in haddii Somaliland ay ciidamadeedka kala bixi weydo gobolka wixii ka dhasha ay masuuliyadeeda ay iyagu qaadi doonaan.
“Haddii ay ciidamadaas deg-deg ugu noqon halka ay ka yimaadeen, wixii ka yimaada masuuliyada iyaga qaadaya,” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Sanaag.
Dhawaan, Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku eedeeyay Somaliland in ay daandaansi milatari ka wado gobolka Sanaag, waxaana uu sheegay haddii Somaliland ay joojin weydo gardarada ay la kulmi doonto cawaaqib xumo.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah dilay labo dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan kuwaasoo madaafiic ka dhex ridayay caasimada Muqdisho, sida uu sheegay masuul dowladda ah. Wasiirka Amniga Qaranka ee dowladda Soomaaliya, [...]